Zuva: Ndira 9, 2020
Sachigaro weAksaray Commodity Exchange Hamit Özkök, uyo akaenda kuA Ankara kunoteedzana akakosha, Cüneyt Göktaş, Sachigaro weAksaray Chamber of Commerce neindasitiri, Nurettin YAPCAN, Sachigaro weAksaray Commodity Exchange, Aksaray [More ...]
Minister Turhan, pamusangano wevatapi venhau unonzi Mesafe Kureba uye Zvinangwa Zvakavharwa mumakore gumi nematanhatu muRailways ünde yakarongedzwa neDirector Directorate yeTurkey State Railways (TCDD), yave kugadzira uye kushandura nzvimbo dzese dzekugara yezvivakwa zvekufambisa. [More ...]
Kardemir Karabük Iron neItsimbi Viwanda uye Trade Inc., Sachigaro weBhodi yeVatungamiri, Mustafa Yolbulan, muna 2020, akataura kuti zvinonyanya kukosha kuve kwekudyara kwezvakatipoteredza. Kutaura kuti $ 50 miriyoni yekudyara kwezvakatipoteredza kuri kuenderera mberi [More ...]
Pane zvitsva zvirikuitika muAkçaray, iyo inosarudzwa nevanhu veIzmit mukufambisa. Mazuva ese, zviuru zvevanhu vaishandisa chikafu uye chinwiwa chinotengesa vekiing Akçaray kumira kwakatanga. Mumwe wemachina ekuvheedzera akaiswa muEast Barracks Stop. automat [More ...]
IMM icharonga musangano kuti uburitse pachena masayenzi ezve Kanal Istanbul uye kuti ape ruzivo kuIstanbulites. Kutaura kwekuvhura kwewekishopu kuchaitwa kuIstanbul Congress Center mangwana. [More ...]
Mutevedzeri weGurukota rezvemaindasitiri pamwe neTekinoroji Mehmet Fatih Kacır akashanyira Istanbul Commerce University uye akawana ruzivo kubva kuvakuru veTransation Systems Chikumbiro uye kutsvagisa Center. Kacir, AGT metro system ichaunza ajenda yeIse Ministry, akadaro. [More ...]
Ilker Celikus, Sachigaro weTurk Ulas-Sen Bazi, akaunza zvipomerwa kuti TÜDEMSAS ichasanganiswa neTULOMSAS uye TUVASAS, akati: [More ...]